CAALAMKU CUNAQABATAYN AYUU SAARAY SOMALILAND, AFAR MASHRUUC OO INAGU RIDAYA DHABAHA ISKU FILAANSHAHA.Qalinkii : Eng Mohamed Haibe Hersi |
CAALAMKU CUNAQABATAYN AYUU SAARAY SOMALILAND, AFAR MASHRUUC OO INAGU RIDAYA DHABAHA ISKU FILAANSHAHA.Qalinkii : Eng Mohamed Haibe Hersi
Biyo sacabadaada ayaa lagaga dhargaa . Binu aadmiguna waxa uu ku kala horumaray kolba sida uu iskugu tashado. Inta aanan ka hadal afartan mashruuc, waxa aan wax ka sheegayaa marka hore halka aynu dhaqaalaha lagu dhisaayo laga keenaayo, su aashan oo ah caqabada ina hortaagan.
Si saami qaybsiya ( Share ) in aduunyadu ku dhisato warshadaha iyo shirkaduhu maaha wax cusub , waxanay ka bilaabatay Amsterdam Holland mudo laga joogo sadex boqol oo sano. Waxaana bilawday shirkadii ka ganacsan jirtay xaga bada koonfur bari Asiya ee la odhanjiray VOC. Maadama dhibaatada waqtigaa ku kaliftay inay maalkooda isku geeyaan , ay waqtigan xaadirka ah wadankeena Somaliland haysato, sida dhaqaale xumaan, shaqo yaraan baahsan , ayaa waxa cad in mucaawimo yar oo deeq bixiyayaashu ina siiyaan tiirada inaga saarayn, balse loo baahan yahay in aynu dariiqyo kale raadsano.
Si kalsoonida shacabka ay dawladu u dhiiri galiso, dawladu waxay samaynkartaa gudi ka kooban culimada wadanka aaminsan oo aamina ah iyo dad aqoon u leh saami qaybsiga. Gudigan oo shaqadoodu ka madaxbanaan tahay xukuumada, shaqadooduna ay tahay soo bandhigida mashruuca iyo saamiyada lagaga qayb gali karaayo.
Gudigan waxa ay mudo kadib isku badalayaan xarun dadku saamiga ku iibiyaan kana iibsadaan, sida WALL STREET. Shakhsigu marka uu saami 300 oo Dollar ah ku darsado warshad, ee uu macaashkii warshadu sare u kaco, qiimahii saamigiisuna sare ayuu u kacayaa , waxaana suuragala in uu ku iibiyo toban laab Dollar.
Afartan mashruuc ee aynu ka hirgalinkaro wadankeena , shaqona abuurayaa waxay kale yahiin:
Warshada sibidhka oo meelo badan oo wadankeena ah laga dhisi karo, shaqo abuuris ka sakaw, waxaynu ku dhisanaynaa dhaamam waawayn iyo wadooyin ka adag kuwa daamurka laga dhiso ,dayactirna aan u baahnayn.
Dhaamam waawayn. Inkabadan 100 doox ayaa xiliga roobka waxay bada ku daraan biyo xadigoodu uu aad u badan yahay. Hadii aynu dhaamam waawayn ka dhisno sibidhkii aynu samaynay, dhaamamkaas oo ay dhisi karaan shirkadaheena iyo dadkeena ka shaqeeya dhismaha, waayo fikrada guud ee dhismaha dhaamku waa gidaar biyaha celiya. Loomana baahna in aynu shisheeye inaga caawiya barino.Dhaamamka waxaynu ku beeri karaa geedka aale sonkorka , kaas oo fa iidooyin badan leh .
Warshada sonkorta iyo alkoosha. Waxa shaqo ka helaaya dad aad u badan, sida dadka warshada ka shaqaynaya, kuwa beeraya aale sonkorka, iyo dadka sii iibinaaya alkoosha iyo sonkorta.Xoolahana hadhaaga aale sonkorka ayaa lagu quudin karaa.
Waxa intaasi dheer in alkoosha loo isticmaali karo shidaalka ( Batroolka ) gadiidka, taas oo aynu kaga maarmayno shidaalkii wisikhaysnaa ee dibada laga keenayay, lacagtii adkaydna I noo dhigmayso.
Warshada laydhka dhalisa . Hadhaagii aale sonkorka ee warshada qashin ahaan uga soo hadhay waxaa laga dhalin karaa koronto, iyada oo lagubayo , kulka ka soo baxana lagu kululaynaayo biyo. Uumiga ka soo baxayna lagu dhaqaajinaayo mashiino waawayn oo loo yaqaan Turbino. Waxaa kaloo korontada laga dhalinkaraa digada xoolaha iyo xashiishka. Halkaana waxaynu ka helaynaa koronto jaban oo deegaanka wasikhaynayn, awoodna leh , la iskuna halayn karo.
Qalinkii : Eng Mohamed Haibe Hersi haibe2005@hotmail.com